Japan Atụmatụ Ntuziaka | Otu Di na Nwunye
Maka ntakịrị obodo, ebe ọdịda anyanwụ na ọdịbendị nke Japan na-agbanwe ngwa ngwa ma dị njọ. Mba dịgasị iche iche, site n'ala ndị dị na snow na-adabere n'ebe ugwu nke dị n'Ọdụ Okinawa nke anwụ na-acha, ihe ọ bụla onye ọ bụla chọrọ ịchọ ga-ahụ na Japan. Ọgaranya bụ ọdịdị, ọdịbendị, akụkọ ihe mere eme, ọdịnala na akụ ndị na-esi nri, Japan kwesịrị ịbanye n'ime uche na-achọpụta ihe, na agụụ afọ na-agụ!
asụsụ: Japanese. A ga-enwe ụfọdụ Bekee na obodo ukwu, dịka Tokyo na Kyoto, onye nlegharị anya na-asụ Bekee ga-enwe ike ịgagharị nke ọma.
Ego: Japanese Yen (JPY). JPY bụ 110 maka 1 USD, mana Tokyo ka dị oke ọnụ. Ọ dị mma, enwere ọtụtụ ụzọ nri nri n'okporo ụzọ ụtọ, yana nhọrọ ịzụta mmanya na Duty Free tupu ị abata n'obodo ahụ. Site na mba ndị ọzọ, ọnụahịa na-abawanye ụba.
Ike Ike: Na Japan, ntọala ike dịka ụdị A na B. Ụdị voltage ọkọlọtọ bụ 100 V na ụdị ọkọlọtọ bụ 50 / 60 Hz.
Nọmba Mberede: 110
Gụkwuo banyere Japan!
Omiyage: Onyinye nke Onyinye Ndị Japan na-enye na Njem Omenala
Omiyage bụ ọdịnala Japan nke a hụrụ n'anya nke inye onyinye mgbe ị na-eme njem, nakwa na a pụrụ ịsị na ọ bụ ihe ncheta nke ụdị (ịsụgharị Bekee bụ "ihe ncheta"), n'ezie ọ dị nnọọ njọ. Ebe e chetara ihe ncheta maka onye njem ahụ, omenala Omiyage bụ kpọmkwem maka ndị enyi na ndị ezinụlọ ha. Ụdị a pụrụ iche nke inye onyinye onyinye Japanese bụ ... GỤKWUO